Manual miaraka amin'ny sehatra rehetra an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Fantatrao ve fa misy boky iray ahafahanao mahita ny fiasan'ny tsirairay amin'ny tontolon'ny Apple Watch anao? Eny, na dia toa tsotra aza izany, ny orinasa Cupertino dia manana toerana voatokana ao amin'ny tranokalany ofisialy izay mampiseho ny antsipirian'ny sehatra samihafa ananantsika amin'ny famantaranandro marani-tsaina.
Izy io dia lisitra lava misy safidy misy izay manolotra ihany koa ny mety hiova araka ny rafitra miasa ampiasainay, Manana ny fampahalalana rehetra momba ny sehatra izahay manomboka amin'ny version of watchOS 6 ka hatramin'ny watchOS 8 amin'izao fotoana izao.
Izany rehetra izany dia ao amin'ny tranokalan'ny Apple manokana
Ny fampahalalana momba ny sehatra samihafa misy dia eto amin'ny tranokalan'ny Apple. Ity fampahalalana ity dia manome fahafahana hahafantatra amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny fiasa rehetra atolotry ny sehatra samihafa izay ananantsika. Tsarovy izany azontsika atao ny mitantana ny fampiasana azy mivantana avy amin'ny famantaranandro na avy amin'ny iPhone.
Ho fanampin'ny fampahalalam-baovao momba ny fampiharana mihitsy, dia tsy maintsy raisinay an-tsaina fa ny fahasarotana azonay ampiana sy amboarina araka izay tiantsika. Ankehitriny koa miaraka amin'ny Ny fampielezan-kevitr'i Apple RED, ny sonia dia mamela ny fampidinana ny sehatra manokana miloko mena. Ny tena marina dia mitovy amin'ny efa ananantsika ihany ireo sehatra ireo fa mitokana amin'ny fampielezan-kevitra ary azontsika atao misintona azy ireo maimaim-poana tanteraka ho an'ny modely rehetra, tsy voatery ho Apple Watch PRODUCT (MENA).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Manual miaraka amin'ny sehatra rehetra an'ny Apple Watch
Ny hadisoana Adobe Creative Cloud amin'ny macOS Monterey famandrihana endritsoratra, dia manana vahaolana